Ndụmọdụ 10 ịghọ ezigbo kpakpando Instagram | Akụkọ akụrụngwa
Instagram bụ otu n'ime netwọ mmekọrịta mmekọrịta kachasị ama ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile na-eziga foto nke anyị kwa ụbọchị, iji gosi ha ndị enyi, ezinụlọ na ọtụtụ ndị ọrụ ndị ọzọ nọ n'etiti ndị enyi anyị. Agbanyeghị, ọtụtụ n'ime ndị mejupụtara netwọkụ mmekọrịta a ga-achọ inwe ike ime onwe ha ka a mara ha, site na foto ha, ọ bụ ya mere anyị ji kpebie ịnye gị usoro nke usoro ihe na-adọrọ mmasị ka ị bụrụ ezigbo kpakpando Instagram na obere oge na n'ụzọ dị mfe.
Ọ dịghị mkpa ka ị bụrụ onye ama ama ma ọ bụ kpakpando bọlbụ na-egbukepụ egbukepụ iji bụrụ onye dị mkpa na netwọkụ mmekọrịta a, yana ọ bụ site na ịdepụta ezigbo onyonyo, na-eme ya oge niile na ịbụ onye na-atọ gị ụtọ ugbua ị nwere ọtụtụ mmeri iji merie.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ akara ngosi nke Instragam, wepụta mkpịsị edemede na akwụkwọ ma ọ bụ mepee ngwa ndetu na mbadamba nkume gị ma ọ bụ smartphone wee dịrị njikere ịdekọ ndụmọdụ anyị ga-egosi gị n'okpuru na nke ahụ ga-eme gị ọzọ Mmetụta nke netwọk mmekọrịta a na-ewu ewu ebe foto, jupụtara na nzacha na retouching, bụ nnukwu kpakpando.
1 Dejupụta ihe ndị dị ndụ gị
2 Bipute foto kwa ubochi
3 Zaa ajụjụ ndị a, mee ka ha mata na ị dị adị
4 Ikwu okwu na foto nke ndị ọrụ ndị ọzọ
5 Bipute foto di mma
6 Jiri #hastags
7 Ejila mmasị ndị ọrụ ndị ọzọ
8 Kwuo aha na foto gị
9 Mara ndị na-eso ụzọ gị iji meziwanye
10 Nyochaa data akaụntụ gị
Dejupụta ihe ndị dị ndụ gị
Profaịlụ na Instagram ma ọ bụrụ na akụkọ ndụ kachasị zuru oke na ọdịda. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịbụ kpakpando na netwọkụ mmekọrịta a, ihe mbụ ị ga-eme bụ imeju gbasara akụkọ ndụ gị dịka o kwere mee yana kwue ihe na-atọ ụtọ nke na-eme ka onye na-agụ ya chọọ ịnọgide na-ahụ ihe gbasara gị.
Gwa ihe ị na-eme, n'ihi na ị nọ na Instagram ma ọ bụrụ na ị nwere weebụsaịtị ma ọ bụ ihe iji gosi ụwa, echefula itinye ya.
Bipute foto kwa ubochi
Ọ bụla oru ngo, n'ebe ọ bụla ọ na-rụrụ, kwesịrị a Ikike na nnọgidesi ike enweghi ngwụcha. Na Instagram ọ na - eme otu ihe ma ọ bụrụ n’ịchọrọ ịbụ ezigbo kpakpando ị ga - ebipụta ma ọ dịkarịa ala otu foto kwa ụbọchị, na - enweghị otu. Ọ dịghịkwa mma na ị kariri foto abụọ were gụọ ndị na-ege gị ntị otu ụbọchị. Ọ dị mfe ịkwụsị ibu arọ ma bido ida ndị na-eso ụzọ.
Buru n'uche na ọ nwere ike ime mgbe niile na ndị na - eso ụzọ gị na - arịọ gị maka foto ma ọ bụ vidiyo ọzọ, yabụ adala ha ma ọ bụrụ na ha jụọ gị n'ozuzu na oke, nye ha ihe ha rịọrọ iji mee ha obi ụtọ. N'ezie, buru n'uche na nke a adịchaghị mma ma pere mpe ma ọ bụrụ na ịmalitebeghị ọrụ gị n'oge na-adịghị anya n'ime netwọkụ mmekọrịta a.
Zaa ajụjụ ndị a, mee ka ha mata na ị dị adị
Ọ dịghị onye na-enwe mmasị ikwu okwu na-azaghị ya dịka ọ bụ ihe mbụ ị ga-eche na eleghara ya anya kpamkpam. Ọ bụrụ n’ịchọghị ka onye ọbụla chee maka gị, ị kwesịrị gbalịa ịza ọtụtụ ihe dịka ndị na-eso ụzọ gị ga-ahapụ na foto ahụ na ị na-ebipụta.
Ọ bụ ụzọ iji nwee mmetụta nke ịbịaru ndị na-eso ụzọ gị nso, ịbụ ezigbo mmadụ na enyi ma mee ka a mara onwe gị n'ụzọ dị mma. Ọ bụrụ n’azaghị azịza ọ bụla, ike ga-agwụ ndị na-eso ụzọ gị maka gị na onye na-eyighị ka ọ dị adị na ọ nweghị uru ịdepụta foto mara mma ma ọ bụ na-atọ ọchị.
Ikwu okwu na foto nke ndị ọrụ ndị ọzọ
Ọ bụrụ na ịzaghachi ihe ha na-ahapụ gị na foto gị dị mkpa, ikekwe ọ dị mkpa ikwu okwu banyere ndị ọrụ ndị ọzọ. Vinghapụ onye ọrụ ọzọ okwu na foto nwere ike ịbụ ụzọ iji dọta uche ha wee si otú a mee ka otu onye na-eso ụzọ ọzọ, kamakwa ọ bụrụ na ịhọrọ foto iji kwuo okwu n'ụzọ ziri ezi yana kwa nkọwa ị na-ekwu bụ nke a tụlere nke ọma, ọ nwere ike ịbụ ihe dị mkpa iji mee onwe gị ka ị mara.
Usoro dị mma iji bụrụ kpakpando Instagram bụ ịza ajụjụ na foto nke ndị ama ama, na-atọ ọchị ma ọ bụ ụda ọchị. Nke a nwere ike ime ka ị nweta visibiliti na ọkachasị ndị na-eso ụzọ. N'ezie, adabala n'ime nzuzu ma ọ bụ mkparị n'ihi na ọ dị mfe ịnweta ndị na-eso ụzọ dịka ọ ga-efu ha ruo mgbe ebighị ebi.
Bipute foto di mma
Ikekwe ọ ga-abụrịrị ndụmọdụ mbụ, ọ bụ ezie na ọ pụkwara ịbụ ihe doro anya na ọ na-aga n'ekwughị. Agbanyeghị, na njedebe m ekpebie ikpezi isiokwu ahụ, ọ bụrụ na mmadụ amabeghị na ọ ga-aga nke ọma na netwọkụ mmekọrịta dịka Instagram naanị foto dị mma bara uru. Anaghị m ekwu maka ihe onyonyo ahụ dị mma ma dịkwa mma, na-asọpụrụ iwu, dịka ọmụmaatụ, nhazi.
Ọ dị mkpa ka ị bụrụ onye nchịkwa a ghọtara nke ị buliri foto ndị na-adịghị agbachapụ agbachapụ ma ọ bụ na-elekwasị anya. Ihe dị oke mkpa maka nke a bụ ka anyị were igwe anyị ga - ewepụta foto ọ bụla anyị ga - ebipụta. Ọtụtụ kpakpando nke netwọkụ mmekọrịta anaghị eji igwefoto nke ama ha ese foto ma jiri igwefoto na-enye ogo dị elu ma na-enye anyị ohere iwepụta foto dị elu nke dị mma maka ụmụazụ anyị.
Ọsọ, ma ọ bụ otu ihe ahụ, isiokwu nke na-amalite na #, nwere ike imeghe ọnụ ụzọ ịbụ ezigbo kpakpando Instagram. Ma nke ahụ bụ Ọ bụrụ na anyị ejiri akara ngosi ziri ezi dee foto anyị n'ụzọ ziri ezi, anyị nwere ike ịbanye na obodo nwere mmasị na ihe oyiyi anyị. soro ya gaa n'ihu na-eso ụzọ.
Ọ bụ ihe amamihe dị na itinye ngwa ngwa metụtara foto anyị ma ọ bụ nke dị ugbu a, nke ga-enyere anyị aka inweta mkpa. E nwekwara ghastags kpochapụwo ma dị ezigbo mkpa nke nwere ike ịhapụ anyị ịnweta ndị ọrụ yana mkpa. Examplesfọdụ ihe atụ bụ #pvascriptheday, #instamovie ma ọ bụ #instadog.
Ejila mmasị ndị ọrụ ndị ọzọ
Inye mmasị na foto nke ndị ọrụ ndị ọzọ nwere ike iwetara gị ọtụtụ elele Ọ bụkwa na onye ọrụ ọ bụla hụrụ na ị nyela ihe yiri ya na foto ya, ọ bụrụ na ọ maghị gị, ọ ga-achọ ịmata maka gị. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ ga-eduga ya ileta profaịlụ gị ma nwee mmasị na mbipụta gị.
Ya adịla mgbe ị ga-amasị ihe ndị ọrụ ndị ọzọ n'ihi na ọ nwere ike ịbụ ụzọ dị mfe ma na-atọ ụtọ iji nweta mkpa na Instagram yana karịa ihe niile iji nweta ndị na-eso ụzọ ọhụrụ.
Kwuo aha na foto gị
Instagram juputara na kpakpando na ndi oru di egwu. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbụ onye ama ama na ụwa ejiji, ị ga-ekwurịrị na ụfọdụ foto gị foto ụdị uwe, ndị nrụpụta ma ọ bụ kpakpando ndị ọzọ nke netwọkụ mmekọrịta. obere iji mee ka a mara gị. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe nke ọma nke a ga-enyere gị aka nke ukwuu.
N'ezie, chioma nwekwara ike bụrụ ezigbo ihe dị mkpa na nke ahụ bụ na ọ bụrụ na ijikwa ijikọ ya na ụdị akwa ma ọ bụ mee ka ha dị ka gị, ọ nwere ike ịbụ isi iyi dị mkpa ịchọrọ iji nweta ihe ịga nke ọma na-enweghị mgbagha.
Mara ndị na-eso ụzọ gị iji meziwanye
O nwere ike iyi ihe nzuzu, mana ọ dị ezigbo mkpa ịmata ndị na-eso ụzọ gị ka ha gbalịa imeziwanye. Buru n’uche oge niile ihe ụmụazụ gị chọrọ n’aka gị ma gbalịa inye ha ihe ha chọrọ. Ọ bụrụ n’inwe Instagram raara onwe ya nye isi nri ma ndị na - eso ụzọ gị rịọ gị ka ị sie ihe ọ bụla, gbalịa ịnye ha ya ma ọ bụ na ị ga - enweta obi ụtọ ha, na ha na - ekwu maka mbipụta gị ma na ha ga - ekerịta ha iru ndị ọrụ ọhụụ na ndị na-eso ụzọ nwere ike.
Kpachara anya ka ị ghara ịdaba ịbụ onye dị mfe ma bulite ihe niile ha rịọrọ gị, ndị niile na-eso ụzọ gị, ọ dị mkpa ka ị debe njirisi gị ma ọ bụghị ire onwe gị na ihe ọ bụla ha rịọrọ gị.
Nyochaa data akaụntụ gị
Iji bụrụ kpakpando Instagram Ọ dị oké mkpa, ọ bụ ezie na ọtụtụ n’ime anyị enweghị mmasị na ya, iji nyochaa data niile n’ihe metụtara akaụntụ anyị. Maka nke a, enwere ọtụtụ ngwaọrụ na-enye anyị ozi dị iche na data gbasara ndị na-eso ụzọ anyị, mbipụta na ozi ndị ọzọ nwere ike ịbara anyị uru.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ịchọghị data, na ihe na-eme ka ị hụ n'anya bụ ibipụta foto, ịza ajụjụ na foto na inye mmasị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ otu n'ime amaokwu Instagram na-esote, ọ dị mkpa na site n'oge ruo n'oge ị nọdụ ala iji nyochaa ma mụọ data metụtara ya na profaịlụ netwọk mmekọrịta gị.
Instagram bụ netwọkụ mmekọrịta na-enweta ọmarịcha ugwu n'oge a na ọtụtụ n'ime anyị na-ekpori ndụ na-ebugo foto ma na-ele ndị enyi na ndị ọrụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịbụ kpakpando nke netwọkụ mmekọrịta a, taa, anyị enyela gị usoro ndụmọdụ na-adọrọ mmasị ị kwesịrị iji nlezianya na-agbaso, ọ bụ ezie na dịka n’ihe ọ bụla chioma bụ ihe ịchọrọ. Zipu foto ndị na-adọrọ mmasị, tinye ndụmọdụ anyị nyere gị taa, ma nwee olile anya na ọdịmma dị n'akụkụ gị ka ị wee bụrụ mkpughe Instagrammer na-esote.
Kedu ndụmọdụ ị tinyeworo iji nwaa ịbụ kpakpando Instagram?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no. O doro anya na ị nwekwara ike ịchọta anyị na Instagram ebe anyị na-ebipụta foto ndị kachasị adọrọ mmasị site n'oge ruo n'oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ndụmọdụ 10 iji bụrụ ezigbo kpakpando Instagram
Nyochaa nke Acer Revo One RL85, a mini PC na obere "Obere"